Maxkamada Caalamiga ICC oo amartay siideynta Hogaamiye kooxeed DRC • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maxkamada Caalamiga ICC oo amartay siideynta Hogaamiye kooxeed DRC
Maxkamada Caalamiga ICC oo amartay siideynta Hogaamiye kooxeed DRC
June 13, 2018 - By: Axmed Muuse
Maxkamada Caalamiga ah ee Danbiyada Dagaal ayaa Salaasadii shalay amar ku bixisay in xabsiga laga siidaayo Jean-Pierre Bemba oo horey mar usoo noqday Madaxweyne kuxigeenka dalka DR Congo.
Jean-Pierre Bemba ayaa sanadkii 2016 lagu xukumay xabsi ah 18 sano, kadib markii lagu eedeeyey inuu mas’uuliyadeeda qaadayo danbiyadii dagaal oo ay geysteen maleeshiyaad isaga ka amar qaadan jiray oo lagu magacaabo MLC oo xasuuqyo ka geystay Jamhuuriyada Afrikada-Dhexe oo ay jaarka yihiin DRC.
Maleeshiyaadka MLC oo ka qeyb qaatay dagaaladii wadanka Afrikada-Dhexe sanadadii 2002-2003 ayaa gacan siinayey Madaxweynihii dalkaasi Ange-Felix Patasse oo ay xulafo ahaayeen Mr.Bemba.
Bemba ayaa hada muddo 10 sano ah ku jira xabsiga ku yaal magaalada The Hague ee dalka Holland, wuxuuna racfaan ka qaatay xukunkii lagu riday.
Inkastoo maxkamada si kumeel gaar ah Bemba usii deysay, hadana hogaamiyahan ayaa la filayaa in markale maxkamada loo soo taago kiis 2aad oo loo heysto oo la xariira inuu isku dayey inuu laaluush siiyo markhaatiyaasha maxkamada la horkeenay kiiskii kowaad, danbigaasi oo uu ku muteysan karo xabsi 5 sano ah.
Qareenada u doodaya Bemba ayaa soo dhaweeyey in hogaamiyahan xoriyadiisa hada helo si loogu fasaxo inuu qoyskiisa oo degen dalka Belguim uu booqdo, iyagoona sheegay inay rajo weyn ka qabaan inay ku guuleystaan laalida kiiska labaad ee loo heysto.
Maxkamadeyntii Bemba ayaa ahayd mid isha si gaar ah loogu hayey, wuxuuna ahaa kiiskii ugu horeyay oo ay Maxkamada ICC hogaamiye ku xukuntay inuu mas’uul ka ahaa danbiyada ay geysteen maleeshiyaadkiisa, gaar ahaan Kufsiga ay ku kaceen askartiisa.
Racfaanka uu qaatay Bemba uuna ku guuleystay ayaa la xariirtay dood qareenadiisa ka keeneen cadeynmaha lagu heystay, Garsoorayaasha Maxkamada ayaa sheegay in xeer illaalinta aysan keenin cadeynmo ku filan oo baneenaya in Mr.Bemba xabsiga lagu sii hayo.